FJKM Ankadindramamy Fahazavana » Fananganana Trano Fiangonana trano vato
Fananganana trano vato
Mankalaza an’Andriamanitra isika noho ny faha-150-taonan’ny FJKM Ankadindramamy Fahazavana. Tsangam-baton’izao Jobily faha-150-taona izao ny fananganana ny Trano Fiangonana ho Trano vato.
Aiza ho aiza isika ankehitriny eo amin’ny fananganana ny Trano Fiangonana vaovao amin’izao taona 2014 izao . Roa taona taorian’ny nanombohana ny fankalazana ny Jobily faha-150-taonan’ny Fiangonana.
Mandroso tsara tokoa ny asa ankehitriny. Amin’izao fotoana izao dia eo am-panorenana ny Trano fidiovana vaovao isika. Rehefa vita soa amantsara io Trano fidiovana vaovao io dia ravana ny Trano itoeran’ny “sacristain” sy ny trano fidiovana ampiasaina ankehitriny. Rehefa izany dia tohizana indray ny fanangana ny Trano Fiangonana vaovao. Iezaka isika hanatratra ny haavon’ny rindrim-bato ho efatra metra ny avy aty amin’ny hady mba hitovizan’izany amin’ireo rindrina efa manodidina ny Trano efa vita.
Noho izany dia entanina hatrany isika zanaky ny F J K M Ankadindramamy Fahazavana hitondra am-bavaka ny asa napetraky ny Tompo hotanterahintsika. Tarihina isika hampiasa ny Talenta, ny fanomezam-pahasoavana nomen’Andriamanitra antsika hoentina manatanteraka izao asa tsara natolony ataontsika izao.
Mahereza sy matanjaha, Homba antsika Andriamanitra.